Property Detail ☘️"Forest City" the paradise island between Malaysia and Singapore with latest Land Reclamation Technology.☘️| Lotaya
Property - ☘️"Forest City" the paradise island between Malaysia and Singapore with latest Land Reclamation Technology.☘️
✅ စင်္ကာပူ၊ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံများကဲ့သို့ ဖြစ်လာမည့် အကြီးဆုံး ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြီးဖြစ်သည့် Man-made Island 🌴 " Forest City " စီမံကိန်းကြီးရှိ Property များအား YPF agency မှတဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားနိုင်ပြီ။
🌴 🌴 Forest City စီမံကိန်းကြီးသည် စင်္ကာပူအစိုးရနှင့် မလေးရှားအစိုးရတို့ ပူးပေါင်းအကောင်ထည်ဖော်နေသော Man-made Island ကြီးဖြစ်ပြီး အကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
♦️ Forest City တွင် နေထိုင်ခြင်း ဖြင့် စင်ကာပူ-မလေးရှား မြို့နှစ်မြို့တွင် နေထိုင်ခြင်း - စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အဆင့်မြင့်လူနေမှုပုံစံနှင့် မလေးရှားနိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုတို့ ကို တပြိုင်တည်းရရှိခံစားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
♦️ မလေးရှားလူမျိုးတို့၏ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တွင် တည်ရှိပြီး
အာရှရှိ အကောင်းဆုံး ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု နေရာများကို နှစ်သက်စွာ ခံစား အသုံး ပြုနိုင် မည် ဖြစ်ပါသည်။
♦️ Forest City တွင် အရောင်းဝယ်ခွန်၊ သွင်းကုန်အကောက်ခွန်နှင့် အခြားအခွန်အခများမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည့် အကောက်ခွန်များ ကင်းလွတ်ရာ ကျွန်းတစ်ကျွန်းအဖြစ် ကြေညာထားပါသည်။
♦️ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ Shattuck-St. Mary's School ကိုလည်းဖွင့်လစ်ပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့ရဲ့ သားသမီး အသက်အရွယ်အားလုံးအတွက် နိုင်ငံတကာ ပညာရေးကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာ သင်ကြားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည် ။
♦️ ♦️ ရေရှည် နေထိုင်ခွင့် ရှိသော မလေးရှားရဲ့ ဒုတိယ အိမ် အဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရှိခြင်း (Malaysia My Second Home Program) ကိုရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ၁၀ နှစ်စာ နေထိုင်ခွင့်ကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားသူ အနေဖြင့် မိမိ ရဲ့ spouse, unmarried child under age of 21 and အသက် ၆၀ ကျော် မိမိရဲ့ မိဘများပါ ခေါ်ဆောင်ခွင့် ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
🤔Why should we invest in Malaysia?
Malaysia နိုင်ငံသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွက် ရင်းနှီးမြှပ်နှံ မှု ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံး နိုင်ငံ အဖြစ် CEOWORLD Magazine (https://ceoworld.biz/worlds-best-countries-to-invest-in-or-do-business-for-2019 ) ရဲ့ ဖော်ပြခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်သည့် အပြင် Forest City တွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ကို လည်း တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုခံထားရသောနေရာ နှင့် Duty Free Shopping Zone အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းကို ရရှိထားတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့ အတွက် Foreign Investment လုပ်လိုသူများ အတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်စရာ နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်
Project သို့ လိုက်လံလေ့လာဝယ်ယူလို သူများ အတွက် ကျတော်တို့ YPF နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီ မလေးရှားနိုင်ငံသို့ November လတွင် Site Visit သွားရောက်ရန်အတွက် စားစရိတ် နေစရိတ်ငြိမ်းပို့ဆောင် ပေးမှာ ဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားသူများ အနေဖြင့် အခုထဲ က ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းထားနိုင်ပါတယ်
လူဦးရေ အကန့်အသတ်ရှိတာ ကြောင့် မြန်မြန် စာရင်းပေးသွင်းထားဖို့ လိုပါတယ်နော်
Please call for Register!!! Limited Offer only !!!
09 77444 9429/ 09 770748583 / 09 79620 1406
✨ ယခုလက်ရှိပြီးစီးနေသော Actual ပုံများကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ✨;
- Shared by Your Property Finder Real Estate Agency Yangon Myanmar